မြန်မာဘယ်မှာလဲ – Purple Feminist Group
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာက ခုချိန်ထိကို ဖြစ်နေဆဲပဲ။ Myanmar is moving backward လို့ပဲ ပြောလိုက်ရမယ်ထင်တယ်။ ပါဝါရှိတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိန်းမတွေက ယောကျာ်းတွေနည်းတူ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံခံရပါတယ်လို့ ပြောလိုက်။ မြန်မာမှာ ဖီးမီးနီဇမ် မလိုအပ်ဘူး ဆိုပြီး ဟစ်ကြွေးလိုက်နဲ့ပဲ နေခဲ့တယ်။
ခုချိန်မှာလည်း Women empowerment လိုလို စာတွေ ရေးတိုင်း အစချီလိုက်တာက ‘အိမ်တွင်းရေး အလုပ်ဆိုတာ မိန်းမ အလုပ်ဆိုပေမဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေ တစ်ခါတစ်လေ လုပ်သင့်ပါတယ်’ ‘ကျွန်မ ဖီးမီးနစ် မဟုတ်ပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေကို နှိမ့်ချတာမျိုးကိုတော့ လက်မခံပါဘူး’
‘ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ သဘာဝအရ နူးညံ့တယ်၊ကြောက်တတ်တယ် ဆိုပေမဲ့ ဒါကို ယောကျာ်းလေးတွေက အခွင့်အရေး မယူသင့်ဘူး’
‘catcall လုပ်တယ်၊ စတယ်နောက်တယ် ဆိုတာ ယောကျာ်းလေး သဘာဝဖြစ်တဲ့ အတွက် မိန်းကလေးတွေက ဒါကို issue တစ်ခုလို မမြင်သင့်ဘူး’
‘ ဘယ်လောက်ပဲ ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်တဲ့ မိန်းမ ဖြစ်နေပါစေ မိန်းမဖြစ်နေတဲ့အတွက် အိမ်အလုပ်တော့တတ်အောင် သင်ရမယ်’
စသည့် စသည့် အတွေးအခေါ် အမြင်ကျဉ်းမှုတွေ အောက်မှာ နှုတ်ပိတ်နေနေရတာ ပင်ပန်းတယ်။
၁. အိမ်တွင်းရေး အလုပ်ဆိုတာ မိန်းမ၊ယောကျာ်း နှစ်ဦးလုံး တတ်ထားသင့်တဲ့ အရာပါ။ ပြီးရင် အားတဲ့ လူ၊ အိမ်မှာ ရှိနေတဲ့ သူက လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ယောနိပါတဲ့ လူကပဲ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မျိုး မရှိထားပါဘူး။
၂. ဘယ် မိန်းမမှ နူးညံ့သိမ်မွေ ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေ နဲ့ မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အဲဒါတွေ အားလုံး အားလုံး သင်ယူပေးခြင်း ခံခဲ့ရလို့ပဲ အကြမ်းဖြင် အားဖြင့် အဲ့လို ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရခြင်းမျိုး ဖြစ်မယ်။ လူ့သဘာဝ အရ မိန်းမရော ယောကျာ်းရော နူးညံ့ နိုင်သလို ၊ ကြမ်းတမ်းတာလည်း ရှိပါတယ်။ မွေးဖွားကြီးပြင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်ပြီး အမူအကျင့် ကောင်းဆိုး ကွာသွားတာပဲ ရှိမယ်။ မိန်းမတွေက ယောကျာ်းတွေထက် မွန်မြတ်တဲ့ လူသား မဟုတ်ပါဘူး။ သူမလည်း လူသားထဲက လူပါပဲ။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ မိန်းမတွေလည်း လောကမှာ တစ်ပုံကြီး ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ဖို့ လိုတယ်လေနော်။
၃. ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ ပြဿနာကို ပြဿနာ လို မမြင်နေနေတာကိုက ပြဿနာ အကြီးတစ်ခု ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ လမ်းတွေက ယောကျာ်းတွေ အတွက်ပဲ ဖန်တီးထားတာမျိုးမှ မဟုတ်ပဲ။ ယောကျာ်းလေးတွေ လမ်းပေါ်မှာ လွတ်လပ်မှု ရှိသလောက် မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိသင့်တယ်လို့ မထင်ဘူးးလား။ Catcall လုပ်တာက ပြဿနာ တစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စကို သည်းမခံသင့်ပါဘူး။
၄. ယောကျာ်း တစ်ယောက်မှာ သူ ဘာလုပ်ချင်တယ်၊ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာ ရွေးချယ်မှု ရှိသလောက် မိန်းမမှာ ဘာလို့ မရှိရတာလဲ။ သူမ စီးပွားရေးနဲ့ အတူ အိမ်အလုပ် လုပ်ချင်ရင် လုပ်မယ်။ အိမ်အလုပ်ပဲ လုပ်ချင်လုပ်မယ်။ စီးပွားရေးပဲ လုပ်ချင်လုပ်မယ်။ ဘေးလူ က သူမ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ပြောပေးနေဖို့ မလိုပါဘူး။ သူမ သိနေပါတယ်။
ဒါတွေက တကယ်စဉ်းစား ကြည့်မယ်ဆိုရင် သိပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလို အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ အခက်တွေ့နေတာကလည်း ပါဝါရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စကားလုံး အောက်မှာ ကျွန်မတို့ အသံ တိတ်သွားတတ်လို့ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း ကလေးအမေ တစ်ယောက် ပြောဖူးတဲ့ စကားကို သတိရမိစေတယ်။ သူက အချိန်ပြည့် အလုပ် တစ်ဖက် နဲ့ သူ့ သားလေးကို ပြုစုပြိုးထောင်နေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ သူ့ အမျိုးသားဟာလည်း အချိန်ပြည့် အလုပ် လုပ်သူဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ပြန်လာတိုင်း သူမဟာ အိမ်အလုပ်ကို ဦးဆောင် တာဝန်ယူလုပ်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ ဆုံမိတိုင်းလည်း သူမကိုပဲ မေးခွန်းများစွာ မေးလေ့ မေးထရှိကြတယ်။ မင်း အလုပ်နဲ့ အိမ်နဲ့ ဘယ်လို ထိန်းနေလဲ။ မင်းယောကျာ်းကိုရော သေချာ ဂရုစိုက်ရဲ့လား။ ကလေးက မိခင် အရမ်း လိုအပ်တယ်နော်။ စသဖြင့် ဝိုင်း စိုးရိမ်တယ်လို့ လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ သူယောကျာ်းကိုတော့ မင်း အလုပ်ဆင်ပြေရဲ့လား။ မင်း သိပ် ပိန်သွားတယ်။ ဆိုတဲ့ ဂရုဏာ စကားတွေ ဝိုင်းပြောကြလေတယ်။ ဒါတွေက သူမကို သိပ်မွန်းကြပ် ဝမ်းနည်းလာစေခဲ့တယ်။ သူမ ပြောဖူးတယ်….’ ပတ်ဝန်းကျင်က ယောကျာ်းတွေ အကြောင်း စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ သူတို့ မျက်စိက မိန်းမတွေပေါ်မှာပဲ အမြဲ ရှိနေတာ။’ ဒါ ဟုတ်တယ်။
အမှန်တော့ မိန်းမတွေ ယောကျာ်းတွေ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ မျက်လုံးကို အနားပေးပြီး ကိုယ်လမ်းကို အကောင်းဆုံး လျှောက်မယ်ဆိုရင် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ လောက ကြီးကို တည်ဆောက်လို့ ရမယ်။
ခုနကလိုသာ ပါဝါရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်တိုင်က လိင်ပိုင်းဆိုင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်း မလုပ်ပဲ တာဝန်သိသိ ပွင့်လင်းစွာ ဖွင့်ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို လျင်လျင်မြန်မြန် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆမိတယ်။
Beawoman that supports another woman.
ဆောင်းပါးရှင် – နန္ဒာ